भक्कानिए डा. केसी [तस्बिरहरु]
२७ दिनको अनशनले कमजोर भएका डा. गोविन्द केसीको १३ दिनसम्म शिक्षण अस्पतालमा उपचार भयो । सामान्य उपचारले नधानेपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयु)मा समेत ६ दिन राखियो । जब तंग्रिन थाले, तब उनी मंगलबार डिस्चार्ज भए ।
बझाङको सदरमुकाम चैनपुर भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले सुदुरका पहाडी जिल्लाहरु कै सुन्दर सदरमुकाम भनेर चिनिन्छ । तीनतीरबाट सेती नदी र बाहुलीगाड खोलाले घेरिएको यो उपत्यका बर्खा याममा झनै सुन्दर देखिन्छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान नगरपालिकाको सिद्धिपुर भएर बग्ने गोदावरी खोलामा सोमबार बिहानै कारबग्यो । रातभरको वर्षात्‌ले खोला बढेका बखत लुभुबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा१४च ४७२९ को कार बिहान करिब ६ बजेतिर बगेको हो । कार चालक (धनी) भने सकुशल रहन सफल रहेको स्थानीयले बताए ।
रमेशकुमार पौडेल, तस्बिरः कञ्चन अधिकारी
नारायणगढ मुग्लिन सडकमा पहिरोले मात्रै यात्रुलाई पिरोल्दैन । पहिरो सफा भएपछि सडकमा तछाड मछाड गर्दै दौडने गाडीहरुका कारण पनि घण्टौ जाम हुन्छ । सोमबार बिहान नौ बजे लु १ ख ८७६२ नम्बरको गाडी चढेर काठमाडौं जान हिँडेका बिनोद धिताल दुई बजे बल्ल मुग्लिन पुगे । चार बज्दा उनी फिस्लिङ पनि कट्न सकेका थिएनन् ।
'बोलबम' तिर्थालु जल लिन सुन्दरीजल
साउनको सोमबारमा शिवलाई शुद्ध जल चढाउँदा मनोकामना पुरा शास्त्रीय मान्यता अनुसार बोलबम तिर्थालुहरु जल लिनका लागि साउने झरीको वेवास्ता गर्दै सुन्दरीजलसम्म पुग्ने गर्छन् ।
दुईवटा विषालू गोमन सर्पलाई यसरी नियन्त्रणमा लिए प्रेम विष्टले [फोटो फिचर]
विषालू सर्पहरुलाई समातेर चर्चा कमाएका प्रेम विष्ट पछिल्लो समय सर्प सम्बन्धि जनचेतना फैलाउने काममा सक्रिय छन् । मोरङ्को विराटनगर निवासी विष्टले गत साता उर्लाबारीस्थित सेक्टर वन कार्यालय म‌ंगलबारेमा विषालू सर्प सम्बन्धि जानकारी दिदै थिए ।
मनमोहक स्यार्पूताल [फोटोफिचर]
साउनको पहिलो सातादेखि बाँफिकोट गाउँपालिकामा अवस्थित स्यार्पूताल भरिन उकालो लाग्छ, मध्यतिर आइपुग्दा ताल भरीभराउ । भरीभराउ ताल हेर्न हाल दैनिक एक सय सर्वसाधारण स्यार्पूताल पुग्छन् । बाँफिकोट गाउँपालिका–३ र ५ फैलिएको ताल अचेल भरिभराउ त छँदै छ, खास हेर्न लायक बनेको छ ।
पाँच तारे होटल भन्दा कम छैन वीर अस्पतालको अति विशिष्ट कक्ष
वीर अस्पतालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको उपचारका लागि अति विशिष्ट उपचार कक्ष तयारी अवस्थामा भएपनि प्रयोगमा छैन ।
शनिबार रातिदेखि परेको अबिरल वर्षापछि नेपालगञ्ज उपमहानगरको अधिकांश स्थान जलमग्न भएको छ ।